Etu esi egbochi kesaara akụkọ Instagram gị | Gam akporosis
Netwọk mmekọrịta ọha na eze bụ ihe dị mkpa na ndụ ọtụtụ mmadụ, ebe ọ bụ na a ka na-eji ha ekere oge ụfọdụ nke ndụ ha. Instagram toro n'ụzọ dị egwu n'afọ abụọ gara aga, ịbụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị site na ndị ọrụ iji nwee ike ịmekọrịta dị mfe.
Iji kekọrịta ọtụtụ akụkọ na Instagram ọ kachasị mma ịbelata ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha ghara ịkekọrịta na netwọk kọntaktị, gụnyere ịghara ịhụ ya na kọntaktị ndị ọzọ na-abụghị ndị na-eso ụzọ gị. Nke a nwere oke na akụkọ niile ị bugoro, oge ụfọdụ ọ nwere ike ịmasị na ụfọdụ adịghị.
Nke a agaghị emetụta oke nke posts, Ọ bụ nhọrọ nke ịchọrọ ka akụkọ gị ghara ịmagharị site n'otu ebe ruo ebe ọzọ n'amaghị eji ha. Ihe kachasị mma bụ na onyonyo ọ bụla akọrọ na akụkọ bụ naanị, ihe ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri a ma ama na-elekọta.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igbochi ha ịkekọrịta akụkọ Instagram gị, ọ kachasị mma igbochi ya onye obula, ma ha bu ezi n’ulo, ndi enyi na ndi n’eso gi. Ihe oyiyi na vidiyo nwere ike ibugo na akụkọ ma dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ netwọk nke kọntaktị na ha.
Iji gbochie ha ịkekọrịta akụkọ Instagram gị ị ga-eme ihe ndị a:
Ihe mbu na ihe di nkpa bu imeghe ngwa Instagram na gam akporo ngwaọrụ gị
N'ime ngwa ahụ pịa profaịlụ Instagram gị, ọ dị n'akụkụ aka nri ala, ọkachasị nke ikpeazụ
N'otu oge na nhọrọ pịa akara atọ dị na ntanetị
Mgbe nhọrọ dị iche iche gosipụtara, chọọ "Nhazi" nke ga-adị na ala
Na Ntọala chọọ "Nzuzo" ma gaa na "Akụkọ ihe mere eme"
Ugbua n'ime "Akụkọ ihe mere eme" ebe ọ na-ekwu "Kwe ka ịkekọrịta na akụkọ" deactivate nhọrọ nke mere na ọ dịghị onye nwere ike ịkọrọ gị ihe oyiyi na vidiyo n'oge ọ bụla, ugbu a pịa na azụ akụ nke mere na mgbanwe egosi mmetụta
Site na nke agbanyụrụ akụkọ gị, enwere ike ịhụ naanị ma ọ bụrụ na ịkekọrịta, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị ha, ị ga-agbaso otu usoro rụọ ọrụ nhọrọ "Nye ohere ịkekọrịta na akụkọ". Ọ na-enyere gị aka imeziwanye nzuzo, ọkachasị mgbe ndị kọntaktị ya na-ahụ ya.
Instagram na-agbakwunye atụmatụ ndị dị mkpa iji meziwanye okwu nke nzuzo, dị mkpa karịsịa mgbe ị na-ekerịta foto na vidiyo nke anyị site na akụkọ ndị a ma ama. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ihe nwere ike ime, gụnyere ọmụmaatụ nata ọkwa site na akaụntụ ndị ị masịrị, hazie akpaka Ibọrọ y ogbi amaghi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu esi egbochi igbochi akụkọ Instagram gị
Ekwela ka ududo dikwa ndu igbu ya were oku!